Banaanbax ka dhacay Muqdisho, Cadaado iyo Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Banaanbaxyo ayaa maanta ka billowday qeybo kamid ah Soomaaliya, kuwaasoo looga soo horjeedo hadalkii Madaxweynaha Faransiiska ee ugu gefay diinta Islaamka.
Magaalooyinka Muqdisho, Cadaado iyo Gaalkacyo ayay ka dhaceen dibadbaxyada ka dhanka ah Macron, waxayna dadka wadooyinka calanka Faransiiska, iyagoo ku baaqey in la joojiyo iibsashadda badeecooyinka dalkaasi.
Macron ayaa Arbacadii ku eedeeyay diinta Islaamka inay tahay isha dhibaatooyinka ka taagan aduunka, isagoo taageeray sawir gacmeedyada loola jeedo Nebi Muxamed NNKH oo uu daabacay wargeys dalkaasi ku yaalla.
Dunida Muslimka ayaa si isku mid ah looga cambaareeyay hadalka Macron, oo kiciyay carada dadka Muslimiinta, oo dalal badan ka dhigaya banaanbaxyo waaweyn oo lagu difaacayo Diinta Muslimka iyo Nebi Muxamed NNKH.
0 Comments Topics: gaalkacyo muqdisho
Dagaal ka dhacay Muqdisho xili doorasho lagu mashquulsan yahay
Warar 24 July 2021 10:53